काठमाडाैं, २२ जेठ । नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरिरहेका बेला एनआईसी एशिया बैंकले घरमै बसी अनलाईन खाता खोल्न चाहनेहरूको सेवा तथा सुविधाको लागि खाता खोल्ने प्रक्रियालाई थप सहज तथा ग्राहकमैत्री बनाएको जनाएकाे छ ।...
बुटवल, २२ जेठ । ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरोना भाईरस (कोभिड –१९) विरुद्धको अभियानमा प्रदेश ५ सरकारलाई नगद रु. २५ लाख सहयोग गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमका बीच बैंकको प्रदेश ५ का नायव प्रदेश...
काठमाडौं, २२ जेठ । वैश्विक रुपमै अग्रणी स्मार्टफोन ब्राण्ड ओपोले एण्ड्रोइड १०मा आधारित आफ्नो अधिकारिक सञ्चालन प्रणाली कलरओएस सेवेनका लागि रोलआउट प्लानको घोषणा गरेको छ । अप्रिल महिनादेखि नै ओपोका प्रयोगकर्ताहरुले कलरओएस सेवेनको आधिकारिक...
बिहीबारदेखि बजार ११ बजेसम्म खुल्ने
काठमाडौं, २२ जेठ । व्यवसायीहरूले बिहीबारबाट बिहान ११ बजेसम्म नियमित रुपमा पसल खोल्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बिहान ११ बजेसम्म सबै किसिमका पसल खोल्ने निर्णय गरेको हो । महासंघको बुधबार बसेको...
काठमाडौं, २१ जेष्ठ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा भएको विशेष साधारण सभामा मेगा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले...
झापामा व्यवसायीले जेठ २४ देखि बजार खोल्ने
दमक, २१ जेठ । झापाका उद्योग व्यवसायीले जेठ २४ देखि बजार खोल्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार मेचीनगर उद्योग वाणिज्य संघ धुलाबारीको आयोजनामा जिल्लाका सबै उद्योग वाणिज्य संघहरूबीच सम्पन्न भएको बैठकले जिल्लाका सबै बजार...
काठमाडाैं, २१ जेठ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजीक उत्तरदायित्व नीति अन्तर्गत बीर अस्पताललाई २०० थान व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकद्वारा चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बीर अस्पतालका उप कुलपति...
काठमाडाैं, १९ जेठ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले विभिन्न जिल्लामा रहेर पत्रकारिता गर्ने फोटो पत्रकारहरूलाई प्रेस ज्याकेट उपलब्ध गराएको छ । आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुरेन्द्रराज रेग्मीले नेपाल फोटो पत्रकार महासंघका अध्यक्ष...
घरबाटै विद्युतकाे बिल तिर्न सकिने
काठमाडाैं, १८ जेठ । विपद्को समयमा प्रविधिको प्रयोग गरेर घर वा आफ्नो निवासबाटै सहजैरूपमा विद्युतकाे बिल तिर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । विपद्ले नयाँनयाँ अवसर पनि निर्माण गरिदिन्छ भन्ने आम मान्यता जस्तै नेपाल विद्युत्...
काठमाडौैं, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटमा रिचार्ज कार्ड र सीम कार्डमा पनि २ प्रतिशत कर बढाएका छन् । दूरसञ्चार स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत रिचार्ड कार्ड र सिम दुवैमा कर बढेको हो । यसअघि...
काठमाडौं, १६ जेठ । नेपाल लगायत पूरै विश्व कोरोनाको प्रभावमा जकडिएकै समयमा अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर हेल्थ एन्ड हाईजिन प्रडक्ट प्रा. लि.ले नेपालमा नयाँ सेनेटरी प्याड ब्रान्ड ‘प्याडिलक्स’ सार्वजनिक गरेको छ ।...
काठमाडौँ, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बिहीबार संघीय संसदका संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट खतिवडाको तेस्रोपटक बजेट हो । आगामी आर्थिक वर्षका...
« 1 …34567… 901 »
शीर्ष नेतृत्वलाई दबाबका लागि नेकपा युवा नेताले दिए पार्टी मुख्यालयमा धर्ना
धनुषामा झडप, दुई राउन्ड हवाई फायर, मुठभेडमा कान काटियो
बालुवाटारमा ओली–प्रचण्ड वार्ता, विकल्पमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति स्मरण गरिने
नेवि संघको कार्यक्रममा देउवाले थर्काए– बढ्ता जान्ने हुने, लाज छैन ?
भारतीय लगानी रहेको मेडिकल कलेजले तिरेन जग्गा भाडाको अढाई करोड